အန်သိုနီ တေလာကို ချဲလ်ဆီးပွဲတွေ ကိုင်တွယ်ခွင့် မပေးဖို့ အလိုရှိနေတဲ့ ချဲလ်ဆီး ပရိသတ် အဖွဲ့မှ အသနားခံစာ အပေါ် ဟာသနှောကာ မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ တူချယ် - xyznews.co
အန်သိုနီ တေလာကို ချဲလ်ဆီးပွဲတွေ ကိုင်တွယ်ခွင့် မပေးဖို့ အလိုရှိနေတဲ့ ချဲလ်ဆီး ပရိသတ် အဖွဲ့မှ အသနားခံစာ အပေါ် ဟာသနှောကာ မှတ်ချက်ပေးလိုက်တဲ့ တူချယ်
ပရီးမီးယားလိဂ် ကွင်းလယ်ဒိုင် အန်သိုနီ တေလာ ဟာ ယနေ့ညမှာ ကစားမယ့် အနောက်လန်ဒန် ဒါဘီ ဘရန်းဖို့ဒ် – ချဲလ်ဆီး ပွဲကို ကိုင်တွယ်ဖို့ ရှိပါတယ် ။ ၎င်းဟာ ယခင် ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ပွဲအချို့မှာ မျှတမှု မရှိတဲ့ ၊ ဘက်ကန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ချမှတ်ဖူးတာကြောင့် ချဲလ်ဆီး ပရိသတ်တွေက ၎င်းအပေါ် အတော်လေး ရွံရှာ မုန်းတီးနေကြပါတယ် ။
အထင်ရှားဆုံး သာဓကတွေကတော့ အာဆင်နယ် အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး အက်ဖ်အေ ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ ၂ပွဲမှာ ဗစ်တာ မော့ဆက်စ် ၊ မတ်တီယို ကိုဗာဆစ် တို့ကို ၂ဝါ ၁နီနဲ့ ထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်း ၊ အမ်းဖီးလ်မှာ နောက်ဆုံး ကစားခဲ့တဲ့ လီဗာပူးနဲ့ ပွဲမှာ ရိစ်ဂျိမ်းစ်ကို တိုက်ရိုက် အနီနဲ့ ထုတ်ပယ်ခဲ့ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
ဒီ အနီတွေဟာ စည်းမျဉ်းတွေ အရတော့ မှန်ကန်သည့်တိုင် ၊ ချဲလ်ဆီး ကို ကြီးကြီးမားမား ထိခိုက် နစ်နာစေခဲ့တဲ့ အပြင် ၊ ချဲလ်ဆီး ပရိသတ်တွေကတော့ ၎င်းရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ လိုတာထက် ပြင်းထန်မှုတွေ ရှိသလို ၊ မျှတမှု မရှိဘူးလို့ ယူဆနေကြပါတယ် ။
ဒီအတွက်ကြောင့် ချဲလ်ဆီး ပရိသတ် အဖွဲ့ တခု ဟာ အန်သိုနီ တေလာ ကို ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ ပွဲတွေကို ကိုင်တွယ်ခွင့် မပေးဖို့ ပရီးမီးယားလိဂ် အဖွဲ့ချုပ်ထံ တောင်းဆိုဖို့ ပြင်ဆင်ထားတဲ့ အသနားခံစာ တခု ကို အခုလိုပဲ ပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ယင်း အသနားခံစာမှာ ” ဒီလူသည် ချဲလ်ဆီး အသင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်းထန်တဲ့ အမုန်းတရား တခုခု ရှိနေသည်မှာ သိသာ ပေါ်လွင်နေသည် ။ ဥပမာ – သူသည် အတိတ်မှာ ချဲလ်ဆီး အသင်းသား အချို့ကို အကြောင်းပြချက် တစုံတရာ မရှိခဲ့ပဲ ၊ အနီပြ ထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီး ၊ အသင်း၏ ရလဒ်ပိုင်းကို အန္တရာယ်ပြု ခြိမ်းခြောက်မှုများ ရှိခဲ့သည် ။ ”
” ဒီ ဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် စစ်ဆေးမှုများ လုပ်သင့်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ ယုံကြည်ထားကာ ၊ အန်သိုနီကို ချဲလ်ဆီး အသင်း၏ ပွဲများအား ကိုင်တွယ် ကြီးကြပ်ရန် ခွင့်မပြုသင့်တော့ပေ ။ ” လို့ ဖော်ပြပါရှိခဲ့ပါတယ် ။
ဒီ အသနားခံစာ ကို ချဲလ်ဆီး ပရိသတ် ၈၀၀၀၀ ခန့်က အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စုရုံး လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုခဲ့သလို ၊ ချဲလ်ဆီး အသင်းရဲ့ စပိန် လက်ရွေးစင် ဘယ်နောက်ခံလူ မားကို့စ် အလွန်ဆို ကလည်း ဒီ အသနားခံစာ အကြောင်း တင်ထားတဲ့ အင်စတာဂရမ်ပို့စ် တခုကို like လုပ်ခဲ့ပါသေးတယ် ။
မနေ့က ပွဲကြို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ ချဲလ်ဆီး နည်းပြ သောမတ်စ် တူချယ် ကတော့ ဒီ အသနားခံစာ အပေါ် ဟာသ အနည်းငယ် နှောကာ မှတ်ချက်ပေးခဲ့သလို ၊ ကွင်းလယ်ဒိုင် ရွေးချယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရီးမီးယားလိဂ်ထံ ကလန်ကဆန် ဖြစ်စေမယ့် တစုံတရာ တုန့်ပြန်မှုမျိုး မလုပ်ခဲ့တာကို တွေ့ရပါတယ် ။
တူချယ် က ” ဒီလို အသနားခံစာ တင်တော့ရော ထူးလာမှာလား ? ကျွန်တော် ဟာ ကွင်းလယ်ဒိုင်တွေ အပေါ် ယုံကြည်မှု ရှိပြီး ၊ အန်သိုနီ တေလာကိုလည်း မနက်ဖြန်ပွဲမှာ အကောင်းဆုံး ကိုင်တွယ်မှုမျိုး ပြသနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ် ။ ”
” ကျွန်တော်တို့ဟာ ကော့ဘ်ဟမ်း လေ့ကျင့်ရေးကွင်းမှာ ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေရင်း ၊ ဒီလို အကြောင်းအရာတွေဆီကို လမ်းကြောင်းလွှဲနေလို့ မရပါဘူး ။ ဒါတွေနဲ့ လွတ်ကင်းရာမှာ ရှိနေဖို့ လိုပြီး ၊ နိုင်ပွဲ ရဖို့ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်ရပါမယ် ။ ”
” ကျွန်တော်တို့ ထိပ်တန်း ကွင်းလယ်ဒိုင်တွေ လိုအပ်သလား ? လိုပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ VAR ဆီက ကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ၊ ဒါမှမဟုတ် ၊ ဘာဆုံးဖြတ်ချက်မှ မပေးတာမျိုး လိုသလား ? လိုပါတယ် ။ ကံကောင်းဖို့ရော လိုသလား ? လိုပါတယ် ။ ဒီတော့ မနက်ဖြန်ပွဲမှာ အန်သိုနီ တေလာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြင်မကြည် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အရာတွေ ပြန်ပြောင်းလာဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။ ” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် တူချယ် က ထို အသနားခံစာမှာ သူရော လက်မှတ်ထိုး ပါဝင်ခဲ့သလား ဆိုတဲ့ အမေးကိုလည်း ရယ်မောရင်း ၊ မထိုးခဲ့ဘူးလို့ ငြင်းဆန်သွားခဲ့ပါတယ် ။ အန်သိုနီ တေလာ ဟာ လောလောလတ်လတ် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဥရောပ နေရှင်လိဂ် ဗိုလ်လုပွဲမှာလည်း ပြင်သစ် အတွက် အနိုင်ဂိုး ဖြစ်တဲ့ ကီလီယန် အမ်ဘတ်ပေရဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် လူကျွံဘော သွင်းဂိုးကိုလည်း ခွင့်ပြုထားခဲ့ပါသေးတယ် ။
Previous Article မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ ဖလားရနိုင်မှုအပေါ် ယာဂင် ကလော့ နဲ့ ပေါလ်စခိုး တို့ရဲ့ အမြင်များ
Next Article ယူနိုက်တက် ကို စိတ်ကုန်လာလို့ လက်စတာကို အနိုင်ပေး ခန့်မှန်းလိုက်တဲ့ ပေါလ် မာဆွန်